Iloft yoMthi - I-Airbnb
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguΧρήστος
Umgangatho wesibini oqaqambileyo nonomoya we-attic uqeshelwe ukubaleka phantsi komthunzi we-Olympus yasentsomini, ecaleni konxweme lwaseThermaikos.
I-attic ivelele ngenxa yokuhlobisa kwayo okukhethekileyo kunye nombono omhle weNtaba ye-Olympus. Ukudibanisa iinkuni kunye nelitye kudala indawo enhle kunye neyonwabileyo efanelekileyo yokuphumla!
Indawo inommandla we-50-55 square metres kwaye inegumbi lokuhlala elikhulu elinesofa yekona ekwaziyo ukuhlalisa umntu omdala okanye abantwana aba-2 (60 cm X 280 cm), kunye ne-CRT TV, indawo yomlilo kunye neefestile ezinkulu ezi-4 ezijonge. Mount Olympus. Ngasekhohlo kungena kwigumbi lokuhlala kukho ibhedi yentsimbi (isiqingatha-kabini kunye nobukhulu obuyi-120 cm X 190 cm) enomandlalo we-anatomical kwaye ngasekunene ikhitshi elinesitovu se-ceramic, i-oveni, ifriji encinci kunye nayo yonke enye into oza kuyidinga. ukuhlala kamnandi.
Emazantsi epaseji ngasekunene uya kufumana igumbi lokuhlambela elineshawa (85 cm X 85 cm) kunye nezinto ezahlukeneyo zokhathalelo lomntu kunye neetawuli zakho.
Ngasekhohlo kwegumbi lokuhlala kukho igumbi elincinci elinesofa esecaleni kwendawo yonke ngomnyango. Ngaphakathi kwegumbi kukho ikhabethe apho unokugcina iimpahla zakho kunye nezinto zomntu.
Ekugqibeleni ecaleni kwebhedi kukho ibalcony eneembono ezimangalisayo zeentaba kunye nendawo ezolileyo yasePeristasi. Kukho itafile yeglasi enezitulo ezi-4 ukonwabela ikofu yakho yasekuseni!
Usapho lwam luhlala kwigumbi elisezantsi kwaye luhlala lukhona ukuze lunike uncedo kunye nolwazi oluluncedo malunga nayo nantoni na eza kwiindwendwe.
Iintsuku eziyi-7 e Peristasi
4.77 · Izimvo eziyi-52
IPeristasi yindawo encinci yasempuma yeKaterini phakathi kwesixeko kunye nolwandle. Izindlu ezincinci eziluhlaza kakhulu kunye nabamelwane abanobuhlobo, zenza indawo efanelekileyo yokuphumla kubomi bemihla ngemihla.
Usapho lwam luhlala kanye kumnyango okufutshane kwaye luyafumaneka kwiindwendwe kwangoko nangaliphi na ixesha loncedo kunye nayo nayiphi na enye into efunekayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Peristasi